မြန်မာ ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ် အရှေ့တောင်အာရှတွင်း အမြင့်မားဆုံးရှိ
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > မြန်မာ ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ် အရှေ့တောင်အာရှတွင်း အမြင့်မားဆုံးရှိ
မြန်မာ ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ် အရှေ့တောင်အာရှတွင်း အမြင့်မားဆုံးရှိ	ခင်မျိုးသွယ်	| တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၁၆ မိနစ်	ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင်း ကျန်းမာရေး အသုံးစရိတ် အမြင့်မားဆုံးတွင် ရှိနေပြီး အသုံးစရိတ်၏ ၈၇ % မှာ လူမမာများ မိမိတို့ ဖာသာအိတ်စိုက် သုံးစွဲနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာ တရပ်က ဆိုသည်။၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း စစ်တမ်း ကောက်ယူထားပြီး ထွက်ပေါ်လာသည့် မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးသူငယ်များ အခြေအနေ သုံးသပ်ချက် အစီရင်ခံစာအရ သိရှိရခြင်း ဖြစ်သည်။“လက်ရှိ အောက်ခြေ လူတန်းစား အများစုက တနေ့ဝင်ငွေ ကျပ် ၁,၅ဝဝ ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတယ်။ နေထိုင်မကောင်း လို့ ရပ်ကွက်ထဲက ဆေးခန်းကိုသွားရင် အနိမ့်ဆုံး ကျပ် ၃,ဝဝဝ ဝန်းကျင် ရှိတယ်” ဟု ရပ်ကွက်ဆေးခန်းတခုတွင် အကူသူနာပြု လုပ်နေသူ မအေးအေးထွေး က ဆိုသည်။အထူးကုဆေးခန်း တခုတွင် သာမန်ရောဂါတခုအတွက် ပြသလိုပါက ဆရာဝန် စမ်းသပ်ခမှာ ကျပ် ၄,ဝဝဝ ခန့် ပေး ရပြီး၊ သူနာပြုခ၊ အရံသူနာပြုခ၊ အခန်းခ စသည့် စရိတ်များအပါအဝင် ပျမ်းမျှ ကျပ် ၁ဝ,ဝဝဝ မှ ၁၅,ဝဝဝ ခန့်အထိ ကုန်ကျနိုင်ကြောင်း အထူးကု ဆေးခန်းတွင် ဖျားနာရောဂါကုသဖူးသူ တဦးထံမှ သိရသည်။“လူအများစု အားထားနေရတဲ့ ရပ်ကွက် ဆေးခန်းလေးတွေမှာတောင် ငွေကြေးကုန်ကျမှုက ကျပ် ၃,ဝဝဝ၊ ၄,ဝဝဝ ဆိုတော့ တထောင်ဖိုး ဆေး ၃ ခွက် ရောင်းတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက စပ်ဆေးဆိုင်တွေကို လူအများစုက အားကိုးလာကြခြင်းဖြစ်တယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။လက်ရှိအခြေအနေတွင် သားဖွားဆရာမခန့်ထားမှု နှုန်းမျာ လူဦးရေ ၄,ဝဝဝ ကျော်တွင် သားဖွားဆရာမ ၁ ဦး နှုန်းသာ ရှိနေပြီး လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူးမှာလည်း လူဦးရေ ၄,ဝဝဝ ဝန်းကျင်တွင် ၁ ဦး နှုန်းသာ ရှိနေသည်။“ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအနေနဲ့ ကျေးလက်ဒေသ၊ ဝေးလံတဲ့ ဒေသနဲ့ နယ်စပ် ဒေသတွေမှာ ပိုပြီး အားနည်းပါ တယ်။ ဒီလိုဒေသတွေနဲ့ ပိုပြီး ဆင်းရဲတဲ့ မိသားစုတွေထဲက ကလေးသူငယ်တွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ကျန်းမာရေး ဆိုးရွားမှုတွေ ပိုပြီး ကြုံကြရပါတယ်” ဟု နယ်စပ်မြို့တခုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ ဆရာဝန် တဦးက ပြော သည်။လက်ရှိအစိုးရ၏ ကျန်းမာရေး သုံးစရိတ်တွေမှာလည်း လွန်စွာ နည်းပါးလျက်ရှိကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။“ဆရာဝန်ကြီးတွေအနေနဲ့ ၁ ရက်ထဲမှာ လူနာပေါင်း ရာချီ ကုနေကြရတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ လူနာအချိုးက ဘယ်လိုမှ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ထိရောက် ကုသမှုရှိမရှိ တိမ်းစောင်းလွဲချောမှု ရှိမရှိ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ဘူး။ ဒီလိုဖြစ်လာတာ နှစ်ပေါင်း အတော်ကြာလာပြီ။ ဖြစ်သင့်တာက ရောဂါ တခုစီနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်တွေ စဉ်ဆက်မပြက် မွေးထုတ်သင့် ပါတယ်” ဟု စာရေးဆရာ - ဆရာဝန် တဦးက ဆိုသည်။ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန အောက်တွင် အထူးကုဆရာဝန် ၁,၈၅၃ ဦး၊ လက်ထောက် ဆရာဝန် ၂,၈၉၆ ဦး၊ အုပ်ချုပ်ရေး ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ရောဂါနှိမ်နင်းရေး ဌာနများတွင် ၆၃၃ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၅,၃၈ဝ ဦး ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
‘ဆေးမတိုးသည့် ငှက်ဖျား’ သုတေသန မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဆောင်ရွက်နေ	ကချင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ဝက်သက်ရောဂါ အဖြစ်များနေ	မူးယစ် ဘိန်းစာရွက်မှုများ မွန်ပြည်နယ်တွင် စတင်ဖမ်းဆီးနေ	မြိတ် ငါးမှုန့်စက်ရုံများ၏ ဘေးဥပဒ် ၈၈ နှင့် လူထုကန့်ကွက်	ဖာပွန်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်း လူဦးရေ တဝက်ကျော် တုတ်ကွေးဖြစ်ပွားနေ	မြန်မာ့ရာဘာ အရည်အသွေး မြှင့်ဖို့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ လုပ်မည်	ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကို လူနာများ မကျေနပ်ဟု စစ်တမ်းဆို Who is Online
We have 100 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved